Qarax Khasaaro geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho & faahfaahino ka soo baxaya | SMC
Home WARARKA MAANTA Qarax Khasaaro geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho & faahfaahino ka soo...
Qarax Khasaaro geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho & faahfaahino ka soo baxaya
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo caawa fiidnimadii ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Qaraxan ayay wararku sheegayaan inuu ka dhacay xaafad ku dhow aargada laga galo degmada Dayniile, ugu yaraan labo caruur ah ayaana ku dhimatay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay sida dadka degaanku xaqiijiyeen.
“Mar kaliya ayaanu ka war helnay qarax ka dhacay iyo caruur daadsan goobta qaraxa uu ka dhacay oo labo meyd tahay, midna dhaawac yahay, sababta qaraxa ka dambeysay illaa hadda war uma heyno, balse waxaan hubaa ineysan jirin ciidan ama dad lalaa beegsanayey oo goobta marayey” ayuu yiri goob jooge ka mid ahaa dadka degaanka.
Weli ma kala cadda in qaraxan uu ahaa haraaga hub caruurtu ku ciyaareen iyo inuu ka dhashay qarax goobta la dhigay oo la doonayey in weerar lagu fuliyo.
Caruurta ay waxyeeladu soo gaartay oo ka dhashay qoysas xaafadaas ku nool ayaa waxaa u soo gurmaday dadka degaanka oo markiiba isbitaalada ula cararay, waxaana halkaas gaaray markii dambe ciidamada amaanka oo baaritaan ku bilaabay sababta qaraxaas keentay.
Previous articleDhageyso Magaalada Baydhabo Oo ku soo badaneya Dhalinyarada Fursadaha shaqa abuuraneya si ay uga baxaan shaqa la,aanta.
Next articleSoomaaliya oo ka qeyb gashay shir deg deg ah oo hab muuqaal ah loo qabtay
Dowlada Itoobiya ka digtay Warar si weyn looga baahiyay Xaalada Abiy Axmed